ArtPC Pulse, akwụkwọ kachasị na Samsung bụ nke gị Mac Pro | Esi m mac
ArtPC usu, Samsung si ọhụrụ oyiri bụ ya Mac Pro
Jordi Gimenez | | Mac Pro, ọtụtụ
Ọzọ anyị ga-ekwu na mgbe Samsung na-atụ aro ya, ọ bụ akụkọ na mgbasa ozi niile ma ọ bụrụ na anyị ezughị ezu na nsogbu ndị ha na-enwe na njedebe ha na nzube nke ahịa ahịa ya, ugbu a ha na-egosi anyị a PC nke dị ka Mac Pro site na ụlọ ọrụ Cupertino. ArtPC Pulse bụ kọmpụta nwere atụmatụ yiri nke kọmputa kọmputa Apple kacha ike. Na ụkpụrụ ọ bụ naanị nke ahụ, ọmarịcha mma, ebe ọ bụrụ na anyị eleba anya na ngwaike nke kọmpụta anyị ghọtara na ọ bụghị nnukwu kọmputa dị ike maka ngalaba ọkachamara nke Mac Pro lekwasịrị anya, ọ bụ kama kọmputa kọmputa n'ihi na ọ bụghị ezigbo achọ ọrụ.
Nkọwapụta ahụ bụ ihe a na-anakwere maka iji ụlọ ebe ọ nwere 5 GHz Core i2,7 processor, 256GB SSD, 8 GB nke RAM na Radeon RX 460 graphic na-enye anyị ohere mụta ọdịnaya na 4K. N'aka nke ọzọ anyị nwere nhọrọ nke Intel i7 processor, 256GB SSD, 1TB HDD, 16GB nke RAM na Radeon RX 460. Na nkenke, anyị na-ekwu maka nkọwa nkịtị na ọnụahịa abụọ edobere karịa $ 1.000, kpọmkwem maka ihe kachasị mfe ọ bụ $ 1.200 na $ 1.600 maka i7.
Nkọwapụta nke kọmpụta a bụ ọkà okwu ogo 360 wuru n'ime ya nwere sistemụ ọkụ ọkụ nwere agba nwere ọtụtụ agba. Na mpempe, imewe bụ otu ihe ahụ dị ka Apple nlereanya na anyị na-adịghị anya site na ihe ọ bụla na ụfọdụ ndị ọrụ na-akpọ ya Samsung Mac Pro ... Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere mmasị nzụta gị n ’Ọktọba 28, ha ga-amalite ahịa ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » Mac Pro » ArtPC usu, Samsung si ọhụrụ oyiri bụ ya Mac Pro
Na ọ bụ cylindrical apụtaghị na ọ bụ otu, Apple enweghị patent nke cylinder. Ma oburu na Jobs weliri isi ya ike, ogaghi emekpa ahu na imewe ahu. Ma onye na-ekwu okwu, ma ọ bụ agba, ma ọ bụ ihe onwunwe, ma ọ bụ ngwá elektrọnik. Enweghi otutu maka silinda ojii….
Zaghachi Juan Moreno
HP mekwara ụdị ihe atụ a n'oge na-adịbeghị anya, ebili mmiri nke Pavilion.
M na-eme ihe n'eziokwu na-amasị ụdị niile yiri na Mac Pro. Amaghị m ma ọ bụrụ na ha nwekwara oke mmachi n'ozuzu. Obi ọmịiko na osx enweghị ike itinye ngwa ngwa na ndị na-abụghị apụl, mana hey. Ọ dị mma ka ihe ndị a pụta. Ya mere, eleghị anya Mac Pro n'onwe ya ga-agbanwe maka mma na gịnị kpatara ya, ụdị Samsung a na nke ha kpọtụrụ aha na Hp. Daalụ
Zaghachi David Christian Duque Gallego
New straps maka Apple Watch na vulcanized silicone si Nomad
You bụ otu n'ime ndị na-etinye ụbọchị na-achọ memes? Ike nke gi na Meme Generator